‘जतिधेरै सन्तुष्टी, त्यतिधेरै खुसी’  Clickmandu
वुद्धि मल्ल २०७५ चैत ६ गते १३:०४ मा प्रकाशित
भनिन्छ मानिस असन्तुष्ट प्राणी हो । उ जति बुझ्ने हुँदै गयो उसको आवश्यक्ता तथा महत्वकांक्षा बढ्दै जान्छ । उसको एकपछि अर्काे आवश्यक्ता सृजना हुँदै जान्छ । त्यसैले पनि बिद्वान मोस्लोले मानिसको आवश्यक्ताको श्रृखलाबद्ध सिद्दान्त प्रतिपादन गरेका छन् ।
प्रत्येक दिन कसैले आफूलाई गरेको सहयोग सम्झेर उ प्रति कृतज्ञ भई मुस्कुराउने गरौं । यो क्रिया दिनदिनै गर्यौं भने हाम्रो जिन्दगीमा खुशीहरु थपिंदै जान्छ । याद राखौं-मेहनत गर्न नछाडौं । सन्तुष्टि भए खुशी आउँछ । सन्तुष्ट बनौं खुशीलाई सँधै कैद गरौं ।
(लेखक मल्ल, ओम डेभलपमेन्ट बैंकका डेपुटी सीइओ हुन्)
वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य ३ सय अनि लघुवित्त कम्पनीको ४/५ हजार ! लाज लाग्दैन ?: गभर्नर (भिडियोसहित)